Biktooleyda oo lagu rinjiyeeyay 95 milyan oo sano oo khad fossilized ah | Abuurista khadka tooska ah
Runtu waxay tahay inay jiraan waqtiyo Kama joojin karno inaan la yaabno dadaallada gaar ah oo xariif ku ah farshaxanada qaarkood. Sidoo kale, qaar ka mid ah soo-jeedimahan waa la illoobi karaa haddii uusan Internetku jirin, gaar ahaan tan iyo markii kanaalada dhaqameed ay mas'uul ka ahaayeen shaandhayntooda, waxaanan hore u ognahay waxa dhaca markay laba ama saddex qabtaan go'aannada ugu dambeeya ee ku saabsan in shaqadu ay leedahay tayo iyo in kale ha sameyn.
Farshaxaniste reer Holland ah oo lagu magacaabo Esther van Hulsen, oo ah helay khad hore Jorn Hurum oo ku takhasusay cilmiga dhirta, wuxuu u adeegsaday tan inuu ku sawiro sideed teendho octopus bakhti ah oo la yiraahdo Keuppia oo noolaa xilligii Cretaceous. Khadkan waxaa laga helay fosil laga helay Lubnaan sanadkii 2009.
Hayso khariidad lafa-guris ah oo ah octopus gacantaada iyo haysashada sharaf aad u leedahay inaad u adeegsato abuurista noolaha baaba'aya waa inay noqdaan mas'uuliyad weyn. Waxyaabaha ay Esther u diyaarisay inay rinjiyento octopus sida aad ku arki karto sawirka wadaaga.
Farshaxan xiisaha nolosha xoolaha iyo inuu badanaa sawiro noocyada noocyada kala duwan ee shimbiraha iyo naasleyda, sidaa awgeed fursadan ah in lagu sawiro octopus oo leh khadkii laga helay haraaga sanadkii 2009 ee Lubnaan, waxaa hadiyad ahaan looga helay Matxafka Palvenn sanadkii 2014.
Ka dib kumanaan sano, Hulson wuu la yaabay taas midabku wuu sii fir fircoonaa, ayaa laga ilaaliyay waqtigaan oo dhan sanduuqa khariidadda ee cephalopod. Wax xiiso leh oo ereyada van Hulsen ay muujinayaan:
Ogow xayawaankan isticmaalay khadkan si uu u noolaado waa iska yaab.
Fikradda sawirkan ka yimid sheekada Mary Anning, Ingriis aqoonyahan cilmiga dhirta iyo aruurinta aruurinta oo sameeyay isla sawirada jawaan khad 1800. Hulsen nuqulkiisa octopus wuxuu hada kuyaalayaa Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ee Oslo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Dhaqdhaqaaqa qadiimiga ah ee taariikh hore ayaa lagu rinjiyeeyay khad u gaar ah oo lafa-gurasho ka badan 95 milyan oo sano jir ah